रातभरीको बर्षाले काठमाडौ र भक्तपुर डुबानमा ! - रातभरीको बर्षाले काठमाडौ र भक्तपुर डुबानमा !
रातभरीको बर्षाले काठमाडौ र भक्तपुर डुबानमा !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ असार 160 Views
काठमाडौ, २८ असार । गए राति परेको भीषण वर्षाका कारण काठमाडौँ र भक्तपुरका केही ठाउँ डुबानमा परेका छन् । भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले भक्तपुर र मध्यपुर डुबानमा परेका हुन ।
काठमाडौँको बाग्मति र विष्णुमतीमा आएको बाढीले पनि केही ठाउँ डुबानमा परेका छन् । तर हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण भक्तपुरका जगाती र बाराही स्थानका बस्तीमा पानी पसेको छ भने भूकम्पपीडितको शिविर डुबानमा परेको छ ।
यता मनोहरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि जडीबुटीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पूरै डुबानमा परेको छ । घर बाहिर निस्कन पनि नसक्ने र घरभित्रै बस्न पनि नसक्ने अवस्थामा परेको यहाँका बासिन्दा अमर थापालेबताए । रासस